Wanjalka Wisiisiga ah ee Cabdiweli Gaas Been Horaa ka Horreysay!
Thursday January 11, 2018 - 22:25:21 in Wararka by Shaqaalaha Burcoonline News
Madaxweynaha maamul-goboleedka Puntland ee Soomaaliya, Cabdiweli Gaas, kama soconayso dacaayadaha riyo-maalmeedka ah iyo wanjalka been abuurka
Garowe (Burcoonline) 11.01.2018 Madaxweynaha maamul-goboleedka Puntland ee Soomaaliya, Cabdiweli Gaas, kama soconayso dacaayadaha riyo-maalmeedka ah iyo wanjalka been abuurka ah ee uu adduunka ku marin habaabiyo. waxaa beesha caalamku ka warqabtaa inay Somalilad safka hore kaga jirto waddamada gobolka ee sida adag ula dirira kooxaha argagixisada ah iyo budhcad badeedda oo labaduba fadhiisinno iyo xarumo ku leh maamul-goboleedka Puntland iyo dalka Soomaaliya.
Waxa la joogaa xilligii Cabdiweli Maxamed Gaas, uu dhadhamin lahaa cawaaqib xumada ka dhalata daandaansiga iyo gardarada uu laasimay ee uu ku hayo Jamhuuriyadda Somaliland. Horjoogaha Puntland wuxuu ku shaqeystaa inuu dalalka daneeya la-dagaalanka argagixisada uu ka dhaadhiciyo macluumaad samays ah oo uu tii ugu dambaysay ku fashilmay.
Bishii September 2016, waxa ciidammada Maraykanka oo helay xog been ah oo maamulka Puntland u gudbiyeen ay ku weerareen fadhiisin ay deganaayeen ciidammada maamul goboleedka Gal-mudug oo loogu sheegay inay ahaayeen Al-shabaab. Waxa duqayntaas ku dhintay in ka badan labaatan askari oo ah kuwa Gal-mudug. Waxay ahayd shirqool dhagareysan oo Cabdiweli Gaas ku guulaystay inuu ku naafeeyo maamulka ay dariska yihiin oo ay isku hayeen muran dhinaca xuduudda ah.
Dhacdadaasi waxay sababtay in dawladda Maraykanku ay Cabdiweli Gaas ku dartay liiska siyaasiyiinta xogtoodu aanay wax ka soo qaadka lahayn, waxaana lagu calaamadiyey inuu yahay beenaale weyn oo marin habaabiyey millatariga Maraykanka.
Ciidammada qaranka Somaliland ayaa Isniintii toddobaadkan la wareegay gacan ku haynta magaaladda Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool, waxaanay baacsadeen maleeshiyaadkii Puntland ee ku sugnaa jiidaas oo firxadkoodii gaadhay duleedka Garoowe. dhirbaxadaasi waxay sas ku abuurtay maamulka Garoowe oo garwaaqsaday inay Somaliland u muuqato mid uu ka dhammaaday dulqaadkii badnaa ee uu ku bartay. Waxaanu iclaamiyey inuu dagaal la geli doono Jamhuuriyadda Somaliland.
Sidii dhaqanka u ahayd madaxweynaha Puntland wuxuu ku hadaaqay eedaymo been abuur ah, waxaanu dawladda Jamhuuriyadda Somaliland ku eedeeyay inay garab u yihiin wax uu ugu yeedhay kooxaha argagixisada oo uu ku dooday in maamulkiisu dagaalka kula jiro. Taasi oo ah mid caalamku aanu ka dhegaysanaynin!
Inkastoo ay Somaliland xeeriso in dalalka mandaqaddu nabad ku wada naaloodaan i, hase ahaatee deris wanaagga ay jeceshahay kuma doorsanayso in taako ka mid ah dhulkeeda lagu soo xadgudbo.
Waxa hubaal ah in mowqifka Jamhuuriyadda Somaliland yahay sidii ay xukuumaddu hore u shaacisay oo ahaa; "Haddii ay Puntland joojin weydo xadgudubka ay ku hayso soohdinta Somaliland inaan la isku qabsan doonin gobolka Sool ee la iskaga hor iman doono Garoowe iyo Boosaaso.” Waxaanan leenahay Puntland iyo qayrkeedba ha ku abshiraan mowqifkaas cad..